Must Read!! Girma Gutema on Qeerroo Bilisummaa oromo | OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
November 28, 2016 OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.ORG	Leave a comment
Haalli qabatamaan qabsoon oromoo yeroo ammaa irra geessee jirtu, qabsoo kallattii maraan of eeggannoo cimaan utubamte ta’uu qabdi. Diinoota ilmaan oromoo irratti dammaqiinsi ummanni oromoo baroota as dhi’oo kana karaa hundaan qabaachaa jiru milkoomina qabsoo ummata oromootiif hedduu gargaareera. Haa ta’u malee ummanni oromoo hundi wal qixa dammaqiinsa shira diinootaa hin qabaatu. Kanaaf karaa qabsoon ummata oromoo jirtu hunda irra shirri diinoonni ilmaan oromoo xaxan akka jirtu hunduu beekee mangaagaa diinaa keessa osoo hin seenin of eeggannoo barbaachisu taasisuu qaba. Of eeggannoon kallattii qabsoon jirtu maraan taasifamtu milkaayina qabsoo sabaa ariifachiifti. Fakkeenyaaf “Qeerroo” jechuun qabsoo ilmaan oromoo gaggeessaa jiran keessatti maal jechuudhaa? hiikkaa maalii qabaa!?
Diinoonni ilmaan oromoo kallattii “Qeerroo” jedhu kanaan maal dalagaa turanii!? Ammas maal dalagaa jiruu!?
Hubannoon ummanni oromoo bal’aan karaa kanaan qabuu hoo maal fakkaataa!?
Jalqaba irratti “Qeerroo” jechuun maal jechuudhaa?
“Qeerroo” jechuun jecha afaan oromoo yoo ta’u, umrii dargaggummaa irratti saala dhiiraa kan bakka bu’uudha. Jechi qixa kanaa kan saalaa dubaraa bakka bu’u ammoo “Qarree” jedhamuun beekkama. Umriin dargagummaa, umrii humna cimaa sadarkaa jireenya dhalli namaa keessa jiraatuutti nama qabaachiftuudha. Qeerroon umrii diina ari’anii harkaan qabuun itti danda’amuudha. Humni umrii qeerroof qarree irratti jiru, humna diina injifachuuf ga’uumsa barbaachusu qabaatu yoo kan shiraaf xaxaa diina ilmaan oromoo of keessaa kan hin qabaanne ta’e qofaadha. Yoo shiraaf xaxaa diinaa of keessaa qabaate humni qeerroof qarree ilmaan oromoo bilisoomsuu danda’u kaayyoo diinaa milkeessuuf oola. Dinoonni qabsoo ilmaan oromoo akkuma yeroo darbe irraa hubanneetti maqaa “Qeerroo Bilisummaa Oromoo” jedhu hanga midiyaa hawaasaa kan akka Raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhamu moggaffachuun humna sadarkaa qeerroof qarree keessa jiru sana hojii diina ilmaan oromoof oolchaa jiran. Ilmaan oromoo sagalee dinaa, Raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo keessa dalagaa turan ni jiru. Yeroo ammaa kanas beekaas ta’u, osoo hin beekin Raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhamu kana keessa kan dalagaa jiran jiru.
Diinonni ilmaan oromoo karaa kanaan daldala siyaasaa hojjachuu baroota dheeraa dura karaa dhooksaaf karaa ifaatiin shira xaxaa turan. Ammas itti jiran. Shira diinoonni xaxan kanaaniis dargaggoota ciccimoo bu’aalee gurguddoo qabsoo ummata oromoof gumaachuu danda’an lakkoofsaan hedduu hidhamuun, ajjeeffamuun, biyyaa baqachiifamuun qabsoo ummata oromoo barbaadamu osoo galmaan hin ga’in karatti shiroota diinaa kanaan sakaallamaniiru. Shirri diinootaan baroota dheeraa irraa jalqabee xaxamaa as ga’e kun sakaallaa qabsoo ta’uun ammas itti fufeera. Sakaallaan shira diinootaa kun kan hiikkamu danda’u shiroota dinootaa karaa qabsoo ummataa jalaan jiran cufa jala bu’uun ifatti bu’aa qabsoo ummata oromoo dursuun saaxiluun qofaadha. Qeerroon wareega qabsoo ummata oromoo kanfalaa turaniif ammas kanfalaa jiran jiru. Kanaaf maqaa “Qeerroo” dhiiga isaanii dhangalasaa jiraniif turanii,lafee isaaniitiin cabaaf caccabaa turaniif jiranii, lubbuu isaanii wareeganiif ammas wareegutti jiranii maqaa qeerroo warra qabsoo ilmaan oromoo sakaalaa jiraniif hojiilee diinaa hojjachaa jiranii adda baafachuun murteessaadha. Kana yoo hin goonee qabsoo ummataatiin taphachuudha.
1. Hoggansi dargaggeeyyii qaroo ilmaan oromoo ummata oromoo biyya keessaaf biyya ala jiran keessaa akka hin baane halkaniif guyyaa waayyaannee wajjiin irratti hojjachaa jiru. Kunis karaa danda’an hundaan dargaggeessota dandeettii hoggansaa qaban isaan biyya keessa jiran hiisisuu, ajjeesisuu, biyyaa baqachiisisuu fa’a. Itti fufuun Ilmaan oromoo biyya alaa jiran jiddutti wal diddaan roga hundaan akka jiraatu gochuu.
3. Qabsoo ilmaan oromoo biyya keessatti finiinsaa jiran dhugaa dhokachuu hin dandeenye waan ta’eef akka waan ofii isaaniitii qabsoo sana gaggeessaniitti Raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhamu kan bobaa diinaa jalatti ofii isaaniitii dhaabbataniin ummata guutuuf dargaggoota haala kana hin beekne karaa danda’an hundaan gowwoomsuun kiyyoo diinaa jala guyyaa guyyaan galchaa jiru
4. Yeroo dargaggoota hisiisuu, ajjeesisuu, midhaalee qaamaa irra geessisuu barbaadan dargaggoota sanneen waliin qabsaa’oota of fakkeessuuf dargaggoota waliin mana hidhaa seenanii ofii isaaniitii ba’uu. Kanaaf fakkeenyi nama muxannoo yeroo dheeraa diina waliin hojjachuun beekkamu keessaa maqaa dhalootaa isaa Girmaa Xurunee Darseetiin kan beekkamuu fi Raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhamu keessatti sagantaa Afaan Oromootiin maqaa Hariiroo Jorgoo jedhamuutiin, sagantaa Afaan Amaaraa keessatti maqaa Jaafar Alii Elemoo jedhamuutiin kan beekkamuu fi maqaan dhalootaa isaa Artistii Ifaa Gammachuu fa’a maqaa dha’uun ni danda’ama.
5. Maqaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhuun caasaa bakka bakkatti babal’ifachuun mataa isaaniitii ittisa waayyaannee jala ta’anii guyyaa guyyaan qabsoo ummata oromoo keessaa qabsaa’oota qabsoo funaanuuf funaansisuun kaayyoo diinootaaf hojjachaa jiraachuu fi k.k.f
Dhimmi maqaa daldala siyaasaa “Qeerroo Bilisummaa Oromoo” jedhamuun gaggeeffamaa ture yeroo darbe fuula midiyaa hawaasaa fi fuula midiyaalee adda addaatiin dhoo’ee gad ba’ee ture. Haala kana hordofuunis yeroo muraasaaf Raadiyoon Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhamu kun namoota haga tokko duraan sagaleen raadiyoo kana keessa dalagaa turan waan iccitiichi isaan jalaa dirretti gad ba’eef haga namoota biroon bakka buusanitti sagantaan oduuleef ibsa ijjannoo isaan dubbisan addaan citee ture. Xinnoo turanii ammas bifa haarawaan namoota biroo dabalatanii deebi’anii dhufanii jiru. Yeroo hedduu namoonni isaan Raadiyoo sana keessatti itti fayyadaman namoota ummata oromoo biratti hojii birootiin beekkamanii fi sagaleen isaanii haaluma salphaan ummata oromoo fi diinota ummata oromoo jalaa sagalee dhokachuu hin dandeenyeedha.
1. Qabsaa’oonni qabsoo ummata oromoo karaa kamuu gaggeessaa jiran shira diinoota irratti dammaquun bilchinaan socho’uu qaban.
2. Ilmaan oromoo beekaas ta’u osoo hin beekin hojii diinummaa qabsoo oromoo irratti bobba’anii jiran ija ilmaan oromoo jalaa yeroo kamuu dhokachuu waan hin dandeenyeef diinummaa isaanii irraa of qusachuu qabu.
Previous PostBaqattoonni Oromoo Yaman Irraa Gara Jabuutii Geessaman Eessa Ga’an?Next PostMust Read!! Girma Gutema on Qeerroo Bilisummaa oromo